Moments Neshamwari 37
Pamakona mana uye hafu dzemakona emudenderedzwa pamusoro peMasonic Keystone yeRoyal Arch Chitsauko ndeye mavara HTWSSTKS Ane hukama hweZodiac, uye nzvimbo dzadzo dzakapoteredza denderedzwa dzinoratidzei?
Mavara H. T. W. S. S. T. K. S. vanovezwa kubva kuruboshwe kurudyi, asi ivo vanofanirawo kutendeuka kubva kurudyi kuruboshwe. Sezvo sekuziva kwedu zodiac, tsamba yekutanga H. iri panzvimbo yeiyoes, yekutanga T. ku aquarius, W. pa capricorn, wekutanga S. pa scorpio, wechipiri S. pa libra, wechipiri T. nhasi, K. pane cancer, uye wechitatu S. pa taurus. Mavara anogona kuwanikwa mumabhuku e Meld, asi kwete mazwi anomirirwa nemavara aya, kana zvazvinoreva, anopiwa mubhuku chero ripi zvaro. Izvo zvinofanirwa, zvakadaro, kukosheswa kuti kukosha kwavo kuri chakavanzika uye kwakakosha uye kwete kuitirwa kuraira nekuvhenekera kwevasina kutora degree reRoyal Arch Chitsauko. Iye munyori haazi wenhengo yeMamel Fraternity, haana kugamuchira kurairo kubva kune ipi neipi yeiyo Fraternity ine chekuita neMasonry, uye haanyepedzeri neruzivo rwezvakavanzika zveMasonic Craft. Asi kufananidzira mutauro wepasirese. Chero ani zvake anozvinzwisisa anofanira kuverenga zvinoreva dombo repamusoro nechiedza cheMasonry, icho chakabatanidzwa mune zodiac, uye yakajekeswa nechiedza chinopihwa zodiac, uye zvichienderana nehukuru hunogamuchirwa hwaanogamuchira. Zviratidzo zvina zodiac, gemini, virgo, sagittary uye pisces, zvinosiyiwa zvichinzi hazvisi kudikanwa kubasa racho, kana zvisina kudaro zvinosanganisirwa muzviratidzo, taurus, leo, scorpio uye aquarius. Taurus, leo scorpio uye aquarius yakanyorwa nemavara S. T., S. T., iyo yakaiswa pakati pakati pezviratidzo aries, kenza, libra uye capricorn. Kana zviratidzo kana mavara zvakatarisana zvakabatana nemitsetse, miviri yekuumbwa ichaumbwa. Muchinjiko unoumbwa netsetse yakatwasuka H. S. uye rwonzi rwakatwasuka K. W. ndiyo stationary yemuchinjiko wezodiac, aries-libra andcancer-capricorn.Muchinjiro unoumbwa nemitsara S. S. naT. T. muchinjiko unosimudzwa we zodiac, unoumbwa nezviratidzo zve taurus-scorpio uye leo-aquarius. Izvi zviratidzo zvinofamba uye muchinjiro zvinoratidzirwa nemhuka ina dzinoyera: nzombe kana nzombe, taurus, inoratidzwa netsamba S .; shumba, leo, kune iri tsamba T .; gondo kana scorpio, munzvimbo yacho iri tsamba S .; murume (dzimwe nguva ngirozi) kana aquarius, munzvimbo yacho pane iyo tsamba T. Kutarisa paukama nenzvimbo dzetsamba nezviratidzo zvezviyambuko zviviri izvi: Tsamba H. uye yakatarisana neyayo S., inomirira musoro wedombo repamusoro uye chigadziko chayo, uye inoenderana neye aries uye libra. Mavara K. uye W. inomiririra mativi maviri ebwe rekiyi, ayo anoenderana nezviratidzo cancer-capricorn. Uyu ndiwo mucherechedzo wemuchina wezodiac. Tsamba yepamusoro S. uye tsamba yepasi S. inomiririra kukona yokumusoro uye yakatarisana nekona yepazasi yebwe rekiyi uye inoenderana nezviratidzo taurus-scorpio ye zodiac. Tsamba yepamusoro T. uye tsamba yepasi T. inoenderana neimwe kona yepamusoro uye pakatarisana nekona yepasi yedombo rekiyi, uye kune zviratidzo aquarius-leo ye zodiac, inoumba muchinjiko wedenga weziro. Aya mavara ebwe rekiyi, kana zviratidzo zvezodiac, anogona kushandiswa ari maviri munzira dzakawanda. Izvo zvichacherechedzwa mavara emusoro uye chigadziko uye mativi wedombo rekiyi akasiyana uye mavara akapesana (S. S. naT. T.) yemakona ayo anoenderana nemuchinjika unoyambuka we zodiac, unoratidzwa nemhuka ina dzataurwa pamusoro, zvakafanana. Dai mavara ebwe repakiyi nepazvinzvimbo zvavo, nezviratidzo zodiac zvaingova zvekujekesa pfungwa uye nekuzivisa vanhu vanoziva, vaisabatsira zvakanyanya uye vaifanira kukandwa parutivi. Asi ivo vane, empeleni, kukosha kwakadzama, kukosha kwenyama uye pamweya.
Zodiac inomiririra munhu mune zvakasikwa uye zvakasikwa zviri mumunhu; iro dombo rinomiririra murume. Tsananguro yenzvimbo dzakaiswa munhu munyika uye nekurimwa kwehunhu izvo iye anokunda izvo zvakaipa zvinomutambudza, asati asimuka kukorona nekubwinya kwehupenyu hwake, yakanyanya kureba kuyedza. Cheteedzero pfupi chete ndiyo inogona kupihwa pano. Sezvo munhu wenyama akaiswa munyama wepanyama mune zodiac yake, saka murume semweya unoiswa mumunhu wenyama, muviri wake wenyama. Semurume akazvarwa nemukadzi anofanira kusimuka kubva mudunhu rakaderera rechisimba, orwara kuburikidza nemhuka yake, uye asimukire mukubwinya kwehunyanzvi hwepamoyo munyika, saka murume semweya anofanira kukunda uye kukwira achibva pachigadziko chemhuka yake uye simuka upedzise murume weungwaru sekorona yake yemweya nekubwinya. SaIxion mune ngano yevaGiriki akasungwa uye akaturikwa pamuchinjiko, kuti adzore zvivi zvake, saka munhu akaiswawo munyika kuti azadzise zvaakatangira; uye, ndizvo zvakaita munhu semweya wakaiswa mumuviri wake wenyama kuti ubatsirwe nemiedzo yemuviri wake, kuti arwadzwe nepo, kusvikira azokunda, iyo mhuka yemhuka, mushure meizvozvo kuti apfuure uye acheneswe nemhando dzose dzekuedza miedzo, kuti ave anokwenenzverwa uye azviratidze kuti akakodzera kuzadza yake chaiyo nzvimbo muchadenga. Zviratidzo zodiac zvinoratidza nhanho uye nemutemo zvinoenderana nevarume vemuviri nepfungwa uye nepfungwa nemweya vanoshanda muzviratidzo zvavo, mukati merimwe zodiac. Mavara ari padombo repakiyi anofanirwa kuratidza nzira uye nzira inoshandiswa nemweya semukati memuviri wenyama mune zodiac yaakaiswa, kuitira kuti ave iro dombo rekiyi rinopedzisa iro rehumambo. Basa reRoyal Arch Chitsauko rinogona kupa chiratidzo chetsamba uye dombo rinokosha; asi zvinogona chete kuva chiratidzo. Munhu somweya anogona kuvaka arch yake, asi haayipedze-haina kunyatsoizadza muhupenyu humwe. Akundwa; anourawa nevadzivisi vake. Nguva zhinji paanofa anomutswa uye anodzoka, uye anoenderera mberi nebasa rake kusvikira asimuka uye azadza nzvimbo yake uye apedza arch yake mutembere. Denderedzwa rehupenyu hwake, iyo arch, ichave yakazara. Iye achazoenda kunze zvakare.
Dombo rinokosha rekona reMason yega yega anotora Royal Arch Chitsauko inomiririra iye kana achinge ave akakodzera uye akagadzirira kuzadza uye kuzadza huwandu hwehupenyu hwake-mutembere isina kuvakwa nemaoko. Munhu saMason, iro dombo repamusoro petembere, parizvino iri pasi penzvimbo yacho. Iye, iyo, ari panzvimbo yebonde, libra, ye zodiac yake. Anofanira kusimuka, anofanira kusimudza. Mushure mokutora chinzvimbo chakaratidzwa nemavara pane ibwe rekiyi, kana zviratidzo zodiac, uye nekuita basa rinodikanwa netsamba imwe neimwe kana chiratidzo, iye anofanira kusimuka nekukosha kwake obata musoro, ino korona nekubwinya. yemunhu. Kana dombo rasimudzwa kubva panzvimbo yebonde kuenda pamusoro, iye, murume, iro dombo repakiyi, achave asingafi. Iye ipapo achave zvese zvinotaurwa nezve White Dombo pane iro rine zita idzva, zita rake idzva, iro iye amene rinoita semucherechedzo pane iro ibwe, iro ibwe rekusafa.